အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်ရှာဖွေရေး - ကျွမ်းကျင်သူများ - အလုပ်အကိုင်🥇 - ်ထမ်းခေါ်ယူမှု
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at ဇြန္လ 13, 2019
Aetna နိုင်ငံတကာနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်များ - ဂလိုဘယ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ Aetna အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမကြာသေးမီကသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေသည့်နိုင်ငံတကာရွှေ့ပြောင်း၏ထားတဲ့ရှုထောင့်မှထွက်ရှာတွေ့ခြင်းငှါ, ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ 2,000 ကျွမ်းကျင်သူများန်ထမ်းစစ်တမ်းကောက်ယူနှင့်အရှိဆုံးကောင်းစွာဖြစ်ခြင်း။ မေးခွန်းများကိုများထဲတွင်ကျွမ်းကျင်သူများသူတို့သည်အလွန်စိန်ခေါ်မှုတွေ့ရှိခဲ့ယူအေအီးတှငျနထေိုငျရာရှုထောင့်အမည်ကိုဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ ယူအေအီးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ၏ 91% '' ချိန်းတွေ့ '' ပြည်ပမှာရွေ့လျားအရှိဆုံးစိန်ခေါ်မှုရှုထောင့်ကိုတွေ့: အဆိုပါစစ်တမ်းကဖော်ပြတယ်။ ဒါဟာကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှ (76%) ယူအေအီးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ၏ 90% '' ချိန်းတွေ့ '' သူတို့ရဲ့သုခချမ်းသာတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဤသည်နှစ်ကြိမ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပျမ်းမျှအား (45%) ယူအေအီးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ၏ 91% '' မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ရှာဖွေတာ '' သူတို့ရဲ့သုခချမ်းသာတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ဒါကပိုမိုနှစ်ဆထက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပျမ်းမျှအား (43%) ကျွမ်းကျင်သူများ၏ 40% ဖြစ်ပါသည် [ ... ]
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at ဇြန္လ 10, 2019
အလုပ်အမဲလိုက်ခြင်း၏ခရီး - အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတဦးတည်းမှာကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ အခုတော့နောက်ကျောကိုငါ့ခရီးစဉ်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်, အလုပ်အမဲလိုက်ခြင်းရန်။ ကျွန်မအခြေအနေကတိထားတော်မပြုလုပ်သဘောပေါက်နှစ်ပတ်အတွင်းခုနှစ်, အဲဒီမှာနေထိုင်စဉ်အလုပ်ရှာရန်ရှိသည်။ ဒါဟာငါ့အဘို့ထိတ်လန့်ခဲ့ပေမယ့်အဖြစ်မှန်ကိုငြင်းပယ်လို့မရပါ။ လေ့လာရေး၏နှစ်ပတ်အတွင်းပြီးနောက်, ငါမကြာမီတစ်ခုခုကိုရှာဖွေရန်သေချာခဲ့ငါတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးငါ၏အကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်မှနှုတ်ဆက်လို့ပြောချင်တယ်။ သူတို့သညျငါ့ကိုကတူခံစားမိလုပ်ဘယ်တော့မှသော်လည်းငါအဆင်ပြေမဟုတ်ခဲ့, သူတို့အပေါ်မှာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်ချင်ကြဘူး။ သူတို့ဟာကိုယ့်သင့်လျော်သောအလုပ်အကိုင်များ filter ခဲ့ရှိရာကနေတချို့သတင်းစာတွေစီစဉ်ပေး, ၎င်းတို့၏လူမှုရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ယက်တွင်ငါ၏အ CV ကိုဖြန့်ဝေ [ ... ]
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at ဇြန္လ 4, 2019
ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အကျွမ်းကျင်သူများကမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် Sohaib Hasan ရဲ့ LinkedIn တို့အလုပ်ရှာဖွေရေး Feed မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးမီဒီယာကနေစာရင်းသွင်းသူများနှင့်နောက်လိုက်နောက်ဆုံးပေါ်ယောဘသည်အခွင့်အလမ်းများ, အလုပ်ရှာဖွေရေးသိကောင်းစရာများများအတွက် Sohaib ရဲ့နေ့စဉ်ပို့စ် feeds တွေကို, Motivation and အများကြီးပိုရပါလိမ့်မယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တစ်ခုကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ခြင်းကျနော်တို့ဆက်လုပ်သင့်သည်ဟုတဦးတည်းရှည်လျားသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ် ... Sohaib Hasan Sohaib Hasan အမှုတို့ကိုပြုနဲ့ Hard အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့အံ့သြဖွယ်သောသဘောထားနှင့်အတူတစ်ဦးပဏာမ-မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံတကာကအတွေ့အကြုံရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး HR အတိုင်ပင်ခံ (ဂျာမနီ, ဗြိတိန်, တရုတ်, ပါကစ္စတန်နှင့်ယူအေအီး) အဖြစ်သူ၏အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားကမ္ဘာတဝှမ်းအလုပ်ရှာဖွေသူများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကူညီပေးသည်။ Sohaib အခြားသူများကိုကူညီပေးသည်တစ်ခုအံ့သြဖွယ်ရူပါရုံကိုအတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ထိုအသေချာဘို့သူဒူဘိုင်းအတွက်အောင်မြင်မှုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးစပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်, မူဝါဒရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး မှစ. , HR စစ်ဆင်ရေးသို့ထိရောက်မှု infusing ။ အဖြစ် Ideation [ ... ]
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at မေလ 24, 2019
သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေနေချိန်မှာသင်ဘာလုပ်နေခြင်းကိုသင့်သလဲ ကောင်းပြီ, သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေနေကြသည်နေစဉ်။ သင်လျှောက်ထားမတိုင်မီသိရန်လိုအပ်ပါအနည်းငယ်အမှုအရာရှိပါသည်။ နှင့်သင်တန်း၏, ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြီးမြောက်ရန်မလွယ်ကူသောအလုပ်ဖြစ်ပါသည်ငါသိ၏။ အခက်ခဲဆုံးအချက်ဖြောင့်အချက်ရန်သင့်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ နှိမ့်ချရအောင်မြင်မှုမှတက်မသတ်မှတ်သင့်ရဲ့စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ဘူး။ ဒါကြောင့်ရေးသားဖို့လွယ်ကူသည်ရိုးသားဖြစ်လိမ့်မည်။ စီမံခန့်ခွဲဖို့အများကြီးပိုခက်။ သငျသညျအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်ရှာဖွေနေကြလိမ့်မည်နေစဉ်, သငျသညျကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်အနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုရှိပါသည်။ ကျနော်တို့အလုပ်ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ရှာဖွေနေအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်ပါ။ စဉ်းစားပါရန်စွမ်းရည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်စွမ်းအောင်မြင်သော! 1 ရှောင်ကြဉ်ဖို့အများစုမှာဘုံယောဘကိုရှာရန်အမှား။ လွန်း [ ... ]
မေလ 21, 2019
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at မေလ 21, 2019
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အယောဘကိုရှာဖွေသူများလမ်းညွှန်ချက်များများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များ။ ဒူဘိုင်းအတွက်အလိုရှိသောအလုပ်အကိုင်အဖို့မရှာဒီတိုင်းပြည်အသစ်ဖြစ်ကြသောသူတို့အဘို့လွယ်ကူသောအလုပ်တစ်ခုကိုဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းများနှင့်အလုပ်ရှင်များ၏အစဉ်အလာကျနော်တို့မူလကပိုင်သည့်နိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသလောက်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ဒူဘိုင်းအမြန်ဆုံး-ကြီးထွားလာမြို့ဖြစ်ပြီးသူတို့ပြိုင်ဘက်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ယှဉ်ပြိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်အလုပ်ရှာဖွေနေသူဟာသူတို့ရဲ့ခြေအိတ်ဆွဲရမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်သို့ငါသူတို့လျော့နည်းလျှောက်လွှာမဟုတ်ရင်ငါအလုပ်ရှင်များမခံစားရဘူး, ဒါကြောင့် thru ငှါရရှိသွားတဲ့သူအလုပ်ရှင်သည်ခေတ်မမီတော့ thru သွားအပေါ်သူတို့ရဲ့အချိန်ဖြုန်းရာအရပ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်၏အဟောင်းပုံစံမွေးစားထားသောအလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများ၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိပါပြီ နှင့်ဆီလျှော်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်။ အလုပ်ရှာဖွေသူများ၏အများစုအမြဲတဦးတည်းဘုံကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်ကပ်ညှပ်ခဲ့ [ ... ]
မေလ 17, 2019
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at မေလ 17, 2019
ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အ Get ရန်ထိပ်တန်း 10 LinkedIn စာမျက်နှာများ
ထိပ်တန်း 10 LinkedIn စာမျက်နှာများဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အ Get စေရန်, ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှရာအရပျကိုအကောင်းဆုံးစာမျက်နှာများဒူဘိုင်း, ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရရန် LinkedIn အပေါ်ကိုလိုက်နာရန်။ လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့၏အလွန်လူကြိုက်များလမ်းဖြစ်လာသည်။ ထိုသို့ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုသိနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာလူအများစုအလုပ်တစ်ခုရဖို့ LinkedIn တို့အလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြု. ရသည်။ မကြာသေးမီကဤပလက်ဖောင်းကျွန်တော်တစ်ဦးအနှစ်မတိုင်မီဒီကုမ္ပဏီနှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးအလုပ်မှာလွယ်ကူသည်၎င်းတို့၏ဘယ်မှာ update လုပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ သင်ပထမဦးဆုံးမှာ LinkedIn တို့အတွက်အနည်းငယ်ကုမ္ပဏီစာမျက်နှာများကိုလိုကျနာသငျ့ယူနိုက်တက်အာရပ်စော်ဘွားအတွက်ပြီးပြည့်စုံအလုပ်ရှာနေလျှင်ဒီတော့ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အ။ ဒါဟာကျိန်းသေသငျသညျသူသည်အနည်းဆုံးအတော်လေးဥာဏ်ကောင်းသောအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးပါမည် [ ... ]
ဇူလိုင်လ 27, 2018
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at ဇူလိုင်လ 27, 2018
လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်နိုင်ငံခြားသားများဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်များအတွက်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်။ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေတာကိုရပ်လိုက်ပါ။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတခုနှင့်အတူအခွင့်အလမ်းများကိုအမိအရဆုပ်ကိုင်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်သူကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့။ စော်ဘွားအတွက်အသစ်တခုလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရရှိရန်ကူညီပေးခြင်း။ အထူးသဖြင့်ပြည်ပမှာအသစ်အလုပျသမားမြားအဘို့အ။ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး၏ကြောင့်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားသားများအဘို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အဖြစ်မှန်အတွက်ဖြစ်လာသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူကျနော်တို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုယူပြီးနေကြသည်။ ဒီအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျိန်းသေကျွမ်းကျင်သူများကလှုံ့ဆျော။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အလုပ်အကိုင်ရရန်။ ကျနော်တို့လုပ်ကိုင်ရန်စတင်ကတည်းက။ နယူးအလုပ်ရှာဖွေသူများအမ်းမရိတ်၌အကြှနျုပျတို့၏စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီတစ်ခု CV ကို upload တင်လို့ရပါတယ်။ ထိုအထဲကအညွှန်ဖို့အတွက်ပြည်ပနိုင်ငံများမှအလုပ်အကိုင်ရတဲ့သူတို့ကိုအများကြီး။ ယေဘုယျအားဖြင့်အဆိုပါအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုစကားပြော။ နိုင်ငံခြားသားများအတွက်အဓိကဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအာရပ်နိုင်ငံတစ်ခုပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ နှင့်ဤအတူစိတ်တွင်, [ ... ]
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at ဧပြီလ 17, 2018
Sharjah အတွက် Sharjah ဂျော့အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူဘို့ငါတို့ကုမ္ပဏီတို့နှင့်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင်အလုပ်ရှာဖွေနေသူအများစုဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ရှာဖွေ။ သို့သော်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အကိုရှာဖွေရန်တခြားနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူများထက်ပို 80% ထိုကဲ့သို့သောဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအဖြစ်လူကြိုက်အများဆုံးမြို့ရွာတို့အဘို့ထိမှန်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ရင်ဆိုင်ရကြပါစို့။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ Sharjah အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကိုရှာဖွေကူညီပေးနေသည်။ ကျနော်တို့အံ့သြဖွယ်အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။ https://www.dubaicitycompany.com/my-time-at-dubai/Especially Sharjah အတွက်အလုပ်အကိုင်အရရှိရန်ရှာဖွေနေကြသူအလုပ်ရှာဖွေသူများသည်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်မှာကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကသင်၏အလုပ်ရှာဖွေ၌သင်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ကမစ်ရှင်ယူအေအီးအတွက်ရှာဖွေစုဆောင်းဖြင့်သင်တို့ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီရည်ရွယ် [ ... ]